Kasta Video ConverterUltimate Alternative: dhakhso ah, More qaabab Output
> Resource > bedelan karo > The Best kasta Video Converter Ultimate Alternative
Video Converter Ultimate Kasta waxaa loogu talagalay in si fudud loogu badalo oo gubi videos ama DVD. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo ku dhawaad ​​qaab video kasta iyo wax kasta oo qalabka warbaahinta la qaadi karo. Xataa waxaa aad u saamaxaaya in ay ka soo dejisan iyo badalo videos ka ah goobaha video qaybsiga loo jecel yahay. Ka sokow, waxa aad awoodi kartaa in aad u isticmaali si ay u qoraan hawlaha desktop ama aad tutorial video ah.
In kastoo kasta Video Converter Ultimate kaa caawin kara inaad gaarto diinta warbaahinta aasaasiga ah, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale u baahan kasta Video Converter Ultimate kale oo dheeraad ah oo sare oo awood leh si aad u hesho DVD fiican iyo Video Conversion.
Waa maxay Tani kasta Video Converter Ultimate Alternative fiican
Hadda waxaa jira dad badan converters video on suuqa. Si kastaba ha ahaatee, Wondershare Video Converter Ultimate noqon kartaa kale ugu wanaagsan ee Video Converter Ultimate kasta. Waxaa oo dhan-in-mid video Converter, video downloader, editor video ah iyo DVD, abuure. Waxaa gabi ahaanba waa aalad wejiyo aad u!
Halkan waxa ku jira hogaanka 6 faa'iidooyinka in la is barbar dhigay Wondershare Video Converter Ultimate la Video Converter Ultimate kasta. Waxaad xaqiiqo ah galin in ay tahay kale ugu wanaagsan ee kasta Video Converter Ultimate
1. Conversion Speed: Wondershare Video Converter Ultimate badasha 30x ka dhaqso badan kasta oo kale video converters la keentay APEXTRANS ™ Technology. Xawaaraha diinta ka fog yahay dhakhso badan Video Converter Ultimate kasta.
2. Video qaabab ay taageerayaan: Wondershare Video Converter Ultimate taageertaa dheeraad ah qaabab video aqbasho, sida TIVO. Wixii qaabab wax soo saarka video, Wondershare Video Converter Ultimate taageertaa 3D ah qaabab video (MP4 3D, 3D wmv, 3D AVI, 3D MKV, 3D YouTube video), halka kasta Video Converter Utimate ma.
3. badalo Video: Wondershare Video Converter Ultimate taageertaa diinta sameecadda ah, halka kasta Video Converter Utimate ma.
4. Edit Video: Wondershare Video Converter Ultimate uu leeyahay shaqo video tafatir oo awood badan ah, sida dejinta video saamiga, iyo video saamayn, isagoo intaa ku daray watermark iyo image.
5. DVD Gubashada: Wondershare Video Converter Ultimate leeyahay daraasiin DVD menu uu ka soo xusho. Doorashada DVD menu oo ku daray background image ama music waxaa taageera, halka kasta Video Converter Utimate ma.
6. Price: $49.95, taas oo la mid ah la Video Converter Ultimate kasta.
Sida loo Isticmaalo Kale Tani si kasta oo Video Converter Ultimate
Wondershare Video Converter Ultimate Uu leeyahay user saaxiibtinimo interface ka badan. Inkastoo aad tahay bilow ah, waxaad si deg deg ah wax uga baran doontaa sida loo isticmaalo.
Talaabada 1: dejinta aad video by toos ah jiidi oo hoos gelin software ah.
Talaabada 2:. yeel qaab saarka adigoo riixaya badhanka arrow hoos ku hoos Qaabka Output Midigta sare ee interface ka
Talaabada 3: Hit ah "Beddelaan" badhanka si ay u bilowdo qaab beddelidda.
Wondershare Video Converter Ultimate La soo saaro muddo sanado ah. Oo hayaa warsiinta iyo in dayactir kooban si loo hagaajiyo waayo aragnimo user. Lahaanshaha marka la barbar dhigo hawlaha ugu muhiimsan ee 2 software-ka, Wondershare Video Converter Ultimate ayaa faa'ido weyn heysata ka badan Video Converter Ultimate kasta. Waxaa hubaal ah kasta oo Video Converter Ultimate kale ugu fiican.